Taliyaha ciidamada AMISOM ee Soomaaliya oo la badalayo – SBC
Taliyaha ciidamada AMISOM ee Soomaaliya oo la badalayo
Kambala-Taliska ciidamada midowga Afrika ee ku hawlgalaya magaca AMISOM ee ku sugan magalada Muqdisho ee caasiamda Soomaaliya ayaa shaaciyey in dhawaan la badalayo taliyaha ciidamadaasi Maj.Gen. Nathan Mugisha, iyadoo lagu badali doono Brig. Fredrick Mugisha oo taliyaha guutada madaafiicda Masindi ee wadanka Ugandha.
Badalkan ayaa noqonayaa kii afaraad waxaana ninkan la badaley uu noqonayaa taliyihii afaraad ee ka tirsan ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ku sugan, waxaana hawsha hogaaminta ciidamada uu la wareegi doona dhamaadka bishan April, sida uu sheegay afhayeenka ciidamada Ugandha Lt. Col. Felix Kulayigye.
Taliska ciidamada Ugandha ayaa iyagu go’aanka badalkan qaatey waxaana ay ka sugayaan ogolaansha midowga Afrika oo ay hoos tagaan hawlgalka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ku sugan kuwaasi oo gacan siinaya dawlada KMG ah ee uu madaxweynaha ka yahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Lama oga sababaha badalka taliyaha ciidamada AMISOM ee ku sugan magaalada Muqdisho kaasi oo u dhashay wadanka Ugandha waxaana uu ku soo aadayaa badalkiisu iyadoo bilihii la soo dhaafay dagaalo xoogan oo ay ku lug lahaayeen ciidamadaasi ay ka dhaceen magaalada Muqdisho, kuwaasi oo ay ku nafwaayeen dad badan oo Soomaali ah iyo waliba ciidamada AMISOM ee ka socda Burundi & Ugandha.
Midowga Afrika wuxuu qirtey in khasaare dhimasho & dhaawac oo fara badan ay soo gaartey ciidamadooda ku sugan magaalada Muqdisho kuwaasi oo ku waxyeeloobay dagaaladii ay ku taageerayeen ciidamada dawlada KMG ah ee Soomaaliya ee la dagaalamaya kooxaha dawlada ka soo horjeeda.
Maxamuud Salaad Geedi
SBC International Kambala